Realme 7 Pro ongororo: Yakakura yepakati-renji sarudzo - WebSetNet
By bartez64 | November 6, 2020
Iyo Realme 7 Pro yakanaka kwazvo, asi inosvinwa nesimba nemakwikwi munzvimbo yepakati-renji
Pros Huru dhizainiSeccellent skriniWell-mutengoCons Realme 7 ingangoita seine simba kune $ 100 shomaMotorola uye Realme X50 inowedzera 5G ye £ 20 zvimwe
Ini ichangobva kuitika akaongorora iyo Realme 7, ruoko rwaipenya munzira dzese, kunze kweiyo isingakwanise kudzora: nhandare inokwikwidza, ingori £ 20 inodhura, yaive yekubata zvirinani neese metric inogona kuyerwa.
Neraki, iyo Realme 7 Pro yakagadzirira kupindira. Asi pa- $ 100 inodhura, zvakakosha here kuburitswa kunze? Uye pane imwe nhare here mu ~ £ 300 bracket yakagadzirira kuba kutinhira kwayo nenzira yakafanana?
Realme 7 Pro Mirror Bhuruu, 8 + 128GB, 6.4 ”AMOLED Yakazara Screen Ratidza, Quad Kamera, 4500mAh Bhatiri ine 65W Dart Charge, Sim Yemahara Smartphone, Dual Sim, UK Plug
£ 279.00 Tenga izvozvi
Realme 7 Pro ongororo: Izvo zvaunoda kuti uzive
Ipo iyo Realme 7 ichishandisa MediaTek chipset, iyo 7 Pro inoenda yakaedzwa uye yakaedzwa nzira yeQualcomm. Pano, iyo 2.3GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 720G inopa simba zvinhu, inotsigirwa ne8GB ye RAM uye 128GB yekuchengetera mukati.
Sezvazviri fashoni mazuva ano, haungotora kamera imwe yakatarisana neshure: unowana ina. Iyo huru 64MPl snapper inotsigirwa ne 8MP yakafara-angle lens uye maviri e2MP sensors ekudzika uye macro kutora mafoto.
Realme 7 Pro ongororo: Mutengo nemakwikwi
iwe tora zvese izvo pa £ 279, kana £ 100 yakawanda kupfuura isiri-pro Realme 7, iyo ini yandinozopinda mairi munguva pfupi.
£ 279 mutengo unonetsa, uine zvakawanda zvingasarudzwa pa £ 100 zvishoma uye £ 100 zvimwe, asi mashoma munzvimbo ino inotapira. Zvinoreva kuti vapikisi vayo ieclectic bunch: iyo £ 320 Samsung Galaxy A51, Google's £ 349 Pixel 4a uye £ 300 Moto G 5G Uyezve. Kune zvekare imwe inonakidza 5G sarudzo: Realme's yake X50 5G, iyo inotengesawo £ 300.
Realme 7 Pro vs Realme 7: Ndeupi musiyano?
Kunyangwe paine akajeka egoridhe yero mabhokisi emaoko maviri emaoko anotarisa zvisingaenzanisike, mafoni maviri aya anoshamisika zvishoma zvakafanana. Mukutaura kwakazara, iyo Pro iri nani sezvaungatarisira, asi haisi yepamusoro munzira dzese. Iyo yenguva dzose Realme 7 ine 90Hz yekuvandudza mwero pachiratidziro, semuenzaniso, nepo iyo Pro iine yako bog-standard 60Hz pani. Kune imwe, iyo 5,000mAh bhatiri iri 500mAh yakakura kupfuura iyo Pro modhi.
Mune imwe nzira imwe neimwe, zvakadaro, zvinhu zvinotarisirwa. Iyo Realme 7 Pro ine inokurumidza Snapdragon 720G processor, 2GB yakawanda RAM uye zvakapetwa kaviri chengetedzo (yeiyo base modhi). Iyo skrini iri diki zvishoma (6.4in vs 6.5in), asi iri Super AMOLED pane LCD, uye ine in-pani yeminwe yekunzwa sensor, futi.
Nepo mafoni maviri aine quad-kamera setups ine 8MP ultra-wide lenses, 2MP portrait sensors uye 2MP macro snapper, iyo kamera huru yakasiyana, ine 48MP Samsung S5KGM1ST mune yakajairwa foni uye 64MP Sony IMX682 muPro.
Muchidimbu, iwe unowana zvimwe nekubhadhara £ 279 yePro, asi yakajairwa ruoko yakakosha kukosha kwe £ 100 zvishoma.
Realme 7 Pro ongororo: Dhizaini
Iyo Realme 7 Pro inovhiringidza musiyano zvishoma kumberi nekutarisa zvakangofanana chaizvo nemutengo unodhura. Icho hachisi chinhu chakashata, nenzira - iyo Realme 7 inotaridzika zvakanyanya senge iyo iPhone X nekutarisa: ruoko rwakatengesa iyo £ 999 makore matatu chete apfuura. Asi padanho rinoshanda, iwe haugone kuwana yakataridzika-yakatarisa foni nekusvetuka Pro vhezheni.
Zvakadaro, iyo yekuwedzera mari inokuwanisa iwe imwe inotonhorera pati pati. Ipo iyo Realme 7 iine chigunwe chigunwe chakatemerwa mubhatani remagetsi, iyo Pro modhi inokutendera kuti uratidze hunhu hwako nekudzvanya chigunwe chako pachiratidziri. Haisi nyowani tekinoroji izvozvi, kutanga kutanga kuVivo's X20 Plus muna 2018, asi kune ruzivo rwangu iyi ndiyo yakachipa nhare yandakaona ichitora mukana, uye inoita kunge inoshanda nekukurumidza uye nemazvo, saka ndiko kukunda mubhuku rangu.
Zvikasadaro, fanano dzinoenderera. Musana ipurasitiki asi unonzwa zvakanaka muruoko, uye iwo maviri-toni yakatwasuka dhizaini ziso rinobatawo. Iyo kamera hump inokanganisa zvishoma, iine malenzi akarongedzwa mune isinganzwisisike inverted 'L' fomati, asi kana Google, Apple neSamsung dzikwanisa kutiza neasingaoneke kamera humps, saka zvingave zvishoma zvine musoro kukwevera Realme pamusoro payo. Izvi zvinoreva kuti foni inodedera zvishoma kana yaiswa pasi patafura, asi pakupedzisira kunetsekana kudiki.
Zvikasadaro, zvese zvinowedzera uye zvakawanda zvacho. Kune 3.5mm headphone jack pazasi, padyo padyo ne USB-C yekuchaja chiteshi. Uyezve, iyo foni inotsigira microSD kadhi kuwedzera uye maSIM maviri pasina kukuita kuti utore uye sarudza pakati pezviviri.
Realme 7 Pro ongororo: Screen
Iyo Realme 7 Pro's 6.4in yekubata yegirazi inoratidzira resolution ye2,400 x 1,080 yeiyo pixel density yeinenge 411ppi. Iyo Super AMOLED nhamba, zvinoreva kuti uri kuwana musiyano wakakwana uye wakanaka, wakadzika vatema. Chokwadi, iyo 'chete' inotsigira zororo remitero ye60Hz, asi zvakafanana zvinoshanda kune mazhinji mafoni ari pamusika, uye zvakanyanya kuita 'zvakanaka kuva nazvo' pane chinhu chakakosha, zvichipiwa ruzhinji rwemaapplication rwakavharirwa ku60fps zvakadaro.
Saka, inoshanda sei sekrini? Zvakanaka kwazvo, muchokwadi, kana iwe uchinge wadzima iyo lurid default mode (sRGB gamut vhoriyamu: 145%) uye woichinjira ku "Nyoro". Yedu colorimeter yakayera 99% sRGB kufukidzwa ine gamut vhoriyamu ye100.3% mune iyi modhi, uye nekuti iri AMOLED, musiyano wakakwana. Pamusoro we432cd / m2, haisi iyo inopenya skrini yatati tamboona, asi ichave yakaringana kune vese asi mazuva akajeka.
Kunyangwe kushomeka kwe90Hz kunowanikwa mune yakachipa Realme 7, mune imwe neimwe ruremekedzo ipaneru rakakura kwazvo, uye kumusoro uko neakanakisa acho mune iri mutengo renji.
Realme 7 Pro ongororo: Performance
Iyo Realme 7 Pro inoshandisa Qualcomm's Snapdragon 720G, chinova chip chatisina kunyatso kuyedza kare (iri kunyanya mushanduro dzemuno dzeXiaomi, Vivo uye Oppo nhare, nekutaridzika kwezvinhu.) Chip icho chinotsigirwa ne8GB ye RAM uye 128GB yekuchengetera mukati. Saka, zvinoita sei?
About par ye ~ £ 300 kosi, chaizvo. Sezvauri kuona kubva pagirafu riri pamusoro, rinotengesa Samsung Galaxy A51's Exynos 9611 kuita, uye iri padanho neiyo Moto G 5G Plus uye Pixel 4a, ayo maviri anoenda zvishoma zvishoma. Nhunzi chete mumafuta ndeye kushanda kwakasimba kweiyo yenguva dzose Realme 7, uko simba reMediaTek G95 yaive chaiyo kushamisika pasuru.
Neraki, iyo Realme 7 Pro inoratidza kukosha kwayo kana zvasvika pakuita graphical, ichiwana inokwana 25% kukurudzira pamusoro peiyo isingadhuri vhezheni mumayedzo eescreen. Zviri nani zvakanyanya kupfuura iyo Samsung Galaxy A51, yakati rebei kupfuura iyo Pixel 4a uye zvakanyanya mukupisa kwakafa ne Motorola Moto G 5G Plus. Muchidimbu, iri kubaya pamusoro pehuremu hwayo, asi kwete zvakanyanya sezvinoita Realme 7.
Neraki, iyo Realme 7 Pro ine imwe hunyengeri kumusoro kwayo ruoko: hupenyu hwebhatiri. Kunyangwe iine 500mAh diki sero, ichienzaniswa neiyo isiri-Pro vhezheni, inokwanisa kuve nemasimba akafanana. Iyo 4,500mAh bhatiri yakachengeta iyo Realme 7 Pro ichiteketa pamwe chete kwe18hrs 10mins mune yedu yakasvinudzwa bvunzo yevhidhiyo. Ipo iri mhino kuseri kwevaikwikwidza navo, mukushandisa chaiko-kwenyika haufambi kutaurira mutsauko: poindi ndeyekuti ichi ruoko runobata zvakanaka nguva iripakati pemhosva.
Zvichiri nani, inotakura neRealme's 65W SuperDart charger iyo inovimbisa 42% yebhatiri rako kumashure mumaminetsi gumi chete, uye chizere chizere mumaminitsi makumi matatu nemana. Sanganisa izvi nehupenyu hwayo hwakareba hwakareba, uye unogona kugutsikana kuti iyi foni yevanhu vanonetsekana nekwavanobhadhariswa mari inotevera.
Realme 7 Pro ongororo: Kamera
Kufanana neyakajairwa Realme 7, iyo Realme 7 Pro inouya nequad-kamera array, uye matatu acho akafanana. Pane 8MP f / 2.3 Ultra-wide lens uye maviri 2MP f / 2.4 sensors: imwe yemacro uye imwe yekudzika.
Musiyano uripo mukamera huru. Ipo yakajairwa Realme 7 ichishandisa 48MP Samsung sensor, iyo Realme 7 Pro ine 64MP Sony IMX682 pachinzvimbo - asi vese vachigovana f / 1.8 aperture.
Saka zvinoita sei? Mumamiriro akajeka, mhinduro "zvakanaka kwazvo". Mifananidzo yakapfava ine zvakawanda zvehuwandu uye yakanaka, yakasarudzika-inotaridzika mavara.
Asi zvinonetsa, hapana musiyano mukuru pakati pePro uye isiri-Pro modhi, sezvaungaona kubva pamufananidzo wekufananidza wakasimudzwa. Ose ari maviri anoibata mushe mushe, kunyangwe kana ichikudzwa kusvika padanho iri, uye ingangoita kupisa kwakafa: iyo Realme 7 ine mwenje uri nani pahwindo, asi iyo Pro modhi inoswedera kumberi neruzivo rwakawedzera pane iyo tilework.
Humbowo mupudding ndeye yakaderera-mwenje kutora mifananidzo, inova inonyangadza kunyangwe anodhura mafoni, ndoda mbiri dzinoenda pasi pe £ 300 imwe chete.
Ndakatora nhare mbiri kuenda mubindu panguva dzehusiku kuti ndione kuti vaizotsungirira sei mumamiriro ezvinhu aisazodaidza kuzara kwesimba re 'nzira yemanheru' asi yaizoramba ichinetsa kupfuura kungoerekana waita.
Pano, kana iwe uchizoregerera iyo pun, ihwo husiku nemasikati. Iyo Realme 7 Pro inotora zvakawanda zvakadzama pamashizha ega, nepo Realme 7 yenguva dzose ichiburitsa ruzha rwekuona uye matavi ari kumashure anongonyangarika kuita smeary blur.
Ini handidi kuwedzeredza: ese ari maviri akakwana pamutengo bracket, asi haina kuita seiyo Realme 7 Pro ichave ichipa Apple kurara husiku pamusoro peiyo nyowani iPhone 12. Kune avo vanokoshesa kutora mifananidzo - kunyanya iwo akadzika-mwenje akasiyana - wobva washandisa iyo yekuwedzera £ 100 inoita kunge yakakodzera.
Kana ari mamwe malenzi, iwo akanaka, asi pamwe haawanzo kushandiswa. Ndakawana iyo macro lens yakawanda fussier pakukiya pane yakajairwa Realme 7, uye ini pachangu ndichiri kufunga kudzika sensors haina kana poindi. Kunze kwekunge makambani ari kuwedzera telephoto lens, ndinotoda ivo vangoita kamera imwe chaizvo, pachinzvimbo chekukanda mune zvimwe nekuda kwayo.
Imwe lensi iyo ingave kupenga kune chero kambani kusiya, zvakadaro, iri pamberi-yakatarisana selfie kamera. Pano, iwe zvakare unowana kusimudzira pane iyo Realme 7 ine 16MP f / 2.1 lens yakatsiviwa ne 32MP f / 2.5 snapper. Kutaura chokwadi, hazviite mutsauko mukuru: ese ari maviri akanaka kune ma selfies nemavhidhiyo mafoni, asi iwe ucharamba uchingoda kamera dzekumashure mune akawanda mamiriro.
Iko Realme 7 Pro inodhonza zvakajeka kubva kune yakajairwa Realme 7 iri muvhidhiyo. Nepo marongero acho akafanana (720 / 1080p pa30- kana 60fps; 4K pa30fps chete), mashandiro acho ari nani pane Pro. Iko hakuna marongero ekusimbisa, asi kukwira kusvika ku60fps kwakaita iyo Realme 7 vhidhiyo yakanyanyisa bouncy, nepo iyo 7 Pro's ichinyanya kugadzikana mune ese ari matatu uye 30fps. Pamusoro peizvozvo, zvinoita kunge zvinoita zvishoma zvirinani kuchinjika shanduko mumwenje, futi.
Realme 7 Pro ongororo: Mutongo
Zvese izvi zvinosiya iyo Realme 7 Pro mune imwe nzvimbo inonetsa. Panyaya yekugadzira, kuita uye hupenyu hwebhatiri, hausi kurasikirwa zvakanyanya nekuchengetedza £ 100 uye kutenga iyo yakajairwa Realme 7. Asi, sekunyora kwandakaita mune iyo ongororo, iyo Xiaomi Poco X3 NFC iri nani munzira dzese kwe £ 20 zvimwe, saka zviri kunze.
Neraki, iyo Realme 7 Pro kusimudzira munzira mbiri dzakakosha: zvese skrini nekamera zvakanyatso kujeka kupfuura zvakajairwa Realme 7. Dambudziko nderekuti Realme 7 Pro ine muvengi wayo ye £ 20 yakawanda: iyo Moto Moto G 5G Uyezve. Inotumidzwa zita, asi pa £ 300 inopa bhatiri refu uye, sekureva kwezita, 5G kubatana.
Iyo Realme 7 Pro foni yakanaka pamutengo wakanaka, asi makwikwi acho anotyisa. Uye sezvairi yakanaka, pamari yangu, iyo Moto ndiyo iri nani kutenga.
Best Motorola mafoni: Ndeapi akanakisa eMobile Mobiles izvozvi uye kuuya munguva pfupi?
← Bose QuietComfort Earbuds ongororo: Iyo itsva yegoridhe chiyero che ruzha-kudzima mahebhu ZTE Blade A7s 2020 yakatangwa pakupedzisira iine 6.5-inch kuratidza, 16MP katatu makamera uye 4,000mAh bhatiri →